विप्लवको महासचिव पद चैट, कसले लियो नेकपाको नयाँ नेतृत्व ? — Imandarmedia.com
विप्लवको महासचिव पद चैट, कसले लियो नेकपाको नयाँ नेतृत्व ?
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तत: बिभाजन भएको छ। नेकपाको बहुमत पक्षले विप्लवलाई महासचिव पदबाट हटाएको छ।
बुधबारदेखि चितवनमा सुरु भएको हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ पक्षको भेलाले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
भेलाले विप्लव र प्रकाण्डलाई हटाउने निर्णय गरेको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले बताए। पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले विप्लवलाई महासचिवबाट हटाएर धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’लाई जिम्मेवारी दिइएको लोहनीले बताए।
पार्टीको बहुमत केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय विप्लवजीहरुले उल्टाउनुभयो । पार्टीको विधि विधान विपरित स्थानीय चुनावमा जान थाल्नुभयो। हामीले पार्टी निर्णयलाई समाएर बस्यौँ ।
उल्टै उहाँहरुले हामीलाई कारवाही गर्नुभयो’ लोहनीले भने, हामीले विप्लवजीलाई महासचिवबाट हटाएर पार्टी संयोजक कञ्चन सरलाई बनायौ।
पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यको बहुमत भएकाले आधिकारिकता आफूहरुले पाउने लोहनीले बताए। ३ दिनसम्म चल्ने सुदर्शन–कञ्चन पक्षको भेलाले पार्टीका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
चितवन भेलामा ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै,पूर्वी नवलपरासीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नं. १ मा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुबीच झडप भएको हो।
उक्त झडपको क्रममा दुवैतर्फका ६ जना घाइते भएका छन्। घाइते भएका ६ जनामध्ये ४ जनालाई टाउकोमा चोट लागेको हुनाले उपचारको लागि चितवनको भरतपुर रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
चुनाव प्रचारमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार लक्ष्मी देवी पाण्डेले प्रयोग गरेको गाडीसमेत तोडफोड भएको छ। उनी अहिले पनि कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार छिन्। एमालेबाट चेतबहादुर राना उम्मेदवार छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी खडा भएकाे भन्दै नेकपा (एमाले) अछामले १४ जनालाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट निस्कासन गरेको छ।
साँफेबगर नगरपालिका-६ मा वडाध्यक्षका बागी उम्मदेवार मीनबहादुर बोहरा, सदस्यका उम्मेदवार खड्कराज मुडभरी, धर्म दुवाल, सावित्री कडारा, अप्सरा स्वारलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहनेगरी निष्कासन गरिएको एमाले अछामका सचिव भीमबहादुर रावलद्वार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै,साेही नगरपालिका-१ मा वडा सदस्यका उम्मेदवार पूर्णकुमार शाह र मय नेपाली, एमाले जिल्ला सदस्य दीपक कुँवर, हर्कविरही विक, जिल्ला सल्लाहकार सदस्य बलबहादुर रावल, बद्रप्रसाद धमाला लगायत छन्।
मंगलसेन नगरकमिटी सदस्य भक्त विक, कमलबजार नगरपालिका-५ का पार्टी अध्यक्ष केशव तिमिल्सेना, साँफेबगर नगरपालिका-९ का अध्यक्ष ध्रुव थापालाई निष्कासन गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।